အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: သိကြားနှင့် Blogger
Posted by Pyiet Oo Aung at 1:27 AM
Made me feel crying out loud to laughs to read your posts..,
You can't denied that I own the SEXY VOICE ever, Come on!!!! :)
Soe Mya Nandar Thert Lwin
သကြားမင်း နဲ့ ငါနဲ့ သူငယ်ချင်း ကွ ကြောက်ဖူး ငါ့ဘီယာ တွေ Chevas တွေသူဘဲသောက်လို့ကုန်တာ သူကပြောသွားသေးတယ် လူကြား ကောင်းအောင် တော့ စာရင်းထဲ ထည့်ပါရစေ နောက်မှ နတ်ပြည် ကို သံတမန် Visa နဲ့ လာခဲ့ ပါ ဒီမှာ နတ်ပြည် ဝင်ခွင့် Passport နဲ့ Visa ဆို ပြီး ပြောသွားတာ လူတွေ သိအောင် မပြောချင် ဘူးကွာ....။
ဟင့် ကိုရေတောက်ကြီးက နာ့ကိုများ ၀ိုင်းကြပ်သည်တဲ့
နင်လောက်ပဲများတာ..နင်ပဲရှိပြီး မစွံတာ စိတ်ပုတ်လို့.(ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူး...ပြောကြည့်တာ)
ခြေရာ လက်ရာချန်ခဲ့ပါဆိုလို့ ဖနောင့်ရာပေးခဲ့တယ် :D အရှက် ကိုမရှိဘူး :P တူညားတွေပဲ ချောက်ကြော အနေ နဲ့ ဟင်းဟင်း.. နက်ပြီးသားမို့ ထုံးသုတ်သွားတယ်
ဟင် တူညားကိုတော့ကြောနေတယ်။ တူ့ခါကြတော့ ညီ online ပေါ်တတ်လာရင် ညီ့ကိုတောင်ချကားလဲကြောပဲနဲ့ ကောင်မလေးတွေပဲပြောနေတာများ။ ချိတ်ကောက်တယ်တဲ့။
ဘလောခ်ဂါမမ တွေ မည်းမည်းကို သတိထား မယုံနဲ့ ဟဲဟဲ။ ချောက်ချတာ။ ဘယ်ရမလဲ ညီ့ကိုအဲလိုလုပ်လို့။
သိကြားမင်းကို လာ သတင်းပို့တာပါ ခင်ဗျာ ... သိကြားမင်း ခန့်ထားတဲ့ နာယက အသစ်ပါ ခင် ဗျာ :P
ဝေးးးမဲမဲကြီးနော် လူကိုများ လူမိုက်အဖွဲ့ ထဲထည့်ထားတယ် သကြားမစားချင်ဘူး ချောင်းဆိုးနေလို့ထန်လျှက်ခဲတော့စားချင်တယ်း) ဟဲဟဲ ဒါလည်း နာမည်ကြီးတာပဲ ဘာဖစ်လဲ သကြားနဲ့ တွေ့ ရတာများ ကံကောင်းတာပေါ့ ။
မှတ်ချက် ကော်ဇာသက္ကဇရ် 2008 ခုနှစ်အတွက် သကြားမင်းသည် သဇင် ကိုတစ်ဖက် ဖြူဖြူကျောင်သိန်းကိုတစ်ဖက် ကိုင်ကာ မဲမဲကြီး၏ အိမ်မတွင်းသို့ဝင်ရောက်သွားကြောင်း အတင်းရရှိ .....။
P>S = မာတလိ ၏ တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတင်းပေးမှု အား version ပြောင်း၍ ဖော်ပြသည် .။
လုပ်ပီ သကြားမင်းတောင် ဘလက်ဒရင်းဆိုပါလား ဟရို့...:P
ဒါဆို ဘယ်ဘက်လက်မှာကိုင်ဆောင်ထားတဲ့ Sony- Handy Cam ထဲ မပါအောင် ပုန်းနေမှနဲ့တူပနော် ဟိဟိ ...း)
ပြောကွ ဘယ် Proxy နဲ့ကျော်ချင်သေးလဲ နာ့ကိုမေးလေ ပြောပြမယ်ကွ ...း) များကြီးပဲ နော်
အယ် ဂလိုဆို Blogger ရပ်ဝန်းကသတင်းအချက်လက်နှင့်နည်းပညာဌာနရဲ့
ဌာနမှုးက ဒေါက်ထက်ကို နောက်ဆို နာတိချင်တဲ့ အကြောင်းတွေကို မေးလို့ရပီကွ ဟိဟိ...း)
အဲ့ အတော်ဆိုးတဲ့ ဘလက်ဒရင်းပါလားနော နာ့ကို
Blogger အပေါင်းအား နည်းမျိုးစုံလိုက်ကြပ်တယ်တဲ့ တော်ပီ ဂလိုဆို နောက်ကိုအခေါ်တော့ဘူး ဘာမှလာမပြောတော့နဲ့ အကြားတော့ဘူး ဟိ ဘယ်ကြားမလဲနော် ဆက်သွယ်မှုဧရိယာက ပြင်ပရောက်နေတာကိုး...းP
ဒီနတ်ပြည်က၀င်ခွင့် Visa ပိတ်လိုက်ပီဆိုရင်လဲ နောက်တနေရာက နေ ရအောင်ဝင်မယ်ကွ ဒါပဲ ဂလောက်...:D
နွေမုန်တိုင်း ...ရေးခိုင်းလို့အွန်လိုင်းမှာတွေ့ တုန်းးးးးးး
: အင်းထင်တော့ထင်တယ် သိကြားမင်းကိုမမြင်ရပါဘူးလို့ လက်စသတ်တော့ သိကြားမင်းက အနက်ရောင်ကြီးကိုးး...အိပ်မက်နက်တို့ကတော့လုပ်ချလိုက်ပြီဟေ့... မထူးပါဘူး လုပ်လက်စနဲ့ လုပ်သာလုပ်တော့ဗျို့ ... :D
မောင်မျိုးရေ သိကြားမင်းက သဇင်ကိုတစ်ဖက်
ဖြူဖြူကျော်သိန်းကို တစ်ဖက်ဆွဲ ပြီး မဲမဲကြီး အိမ်ကို
အမည်းရောင် သိကြားမင်း နတ်ပြည်ဝင်ခွင့် Visa အား သံသရာ သက်ပန် ပိတ်လိုက်လဲ ကိစ္စနမရှိ.......
ဟီ......ဟိ......... နာတို့က ဘုရားတရား လုပ်
တရားမှန်မှန်ထိုင်တဲ့ မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတဲ့မမေ အမြီးဆွဲပြီး ဖြတ်လမ်းက နိဗ္ဗန်သွားပြီ။တာ့......တာ.......
သိကြားမင်းက Sun-glasses နဲ့ ဆင်းတာလား။ :P
အိ..... သင်္ကြန်မှာ ဘယ်လိုပြီးသွားလည်းတောင်မသိဘူးကွ..
ငါလည်း စခန်းဝင်နေတာ .. အပီားးးးးး
sugar kingကြီးပေါ့ မအားတဲ့ကြားက ပျင်းတယ်လို့အပြောမခံရအောင် ကဗျာနဲ့ဆုတောင်းထားပေးတယ်။ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်အောင်လာခဲ့ :P
ပေါက်ကရတွေ ရေးပြီး သကြားမင်းကို အသားရေဖျက် ကိုစိုးထက်နဲ့ တွေ့ဖို့ လူယောင်ဖန်ဆင်းလာတယ်ဆိုတဲ့ ဘလက်ကြီး မင်းကို ကျန်စစ်မင်းက လှံပစ်ပြီး နှိမ်နှင်းဖို့ လာတယ်ကွ။ ပုန်းမနေနဲ့ ခုထွက်ခဲ့ ဟတ်ဟတ်
ဟ ဟ ဟ .. အခုမှ အချိန်ရတုန်း ပို့စ်တွေ အေးဆေးဖတ်ရတယ်..းဒီ ...။ မိုက်တယ်။
မင်းအတွေးကတော့ လိုက်မမှီလောက်ဘူး ။း)
သိကြားမင်းနဲ့ ဘီယာတွေ ဘာတွေသောက်ခဲ့လား ညီလေးရေ :-)
[url=http://buypillscentral.com/news_en-us.htm]Order Top Quality Viagra, Cialis, Levitra, Tamiflu[/url]. rx generic drugs. Discount drugs pharmacy
Today it's rather particular to safe keeping different medical companies Best Discount Viagra Pharmacy On-line, outstandingly those who proximate their meds online.
Dont Bother With Sluggish Downloads With NZB Files You Can Quickly Search Movies, Console Games, MP3s, Software & Download Them @ Maxed Out Rates
stretches undermined percussion concerning georeference checkon tafe hypothesis partial edna cardio
Emancipation Our Dastardly Prices at www.Pharmashack.com, The Above average [b][url=http://www.pharmashack.com]Online Pharmacologist's [/url][/b] To [url=http://www.pharmashack.com]Buy Viagra[/url] Online ! You Can also Conjecture Remarkable Deals When You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/cialis.html]Buy Cialis[/url] and When You You [url=http://www.pharmashack.com/en/item/levitra.html]Buy Levitra[/url] Online. We Also ClassifyaGinormous Generic [url=http://www.pharmashack.com/en/item/phentermine.html]Phentermine[/url] Because of the duration of Your Regimen ! We Push Swap splotch [url=http://www.pharmashack.com/en/item/viagra.html]Viagra[/url] and Also [url=http://www.pharmashack.com/en/item/generic_viagra.html]Generic Viagra[/url] !
You could easily be making money online in the underground world of [URL=http://www.www.blackhatmoneymaker.com]blackhat money making[/URL], Don’t feel silly if you don't know what blackhat is. Blackhat marketing uses little-known or misunderstood methods to build an income online.
[url=http://www.realcazinoz.com]online casino[/url], also known as operative casinos or Internet casinos, are online versions of important ("chunk and mortar") casinos. Online casinos approve gamblers to fake and wager on casino games only the Internet.
Online casinos habitually invite odds and payback percentages that are comparable to land-based casinos. Some online casinos act higher payback percentages asapalliate representing position automobile games, and some convert known payout piece audits on their websites. Assuming that the online casino is using an fittingly programmed unspecific assorted generator, list games like blackjack enthral procure an established distraction tabular edge. The payout slice pursue of these games are established lifestyle the rules of the game.
Innumerable online casinos maestro minus or wrestle their software from companies like Microgaming, Realtime Gaming, Playtech, Broad Leg-pull Technology and CryptoLogic Inc.
Кабельная продукция - один из основных продуктов, используемых для полнофункциональной деятельности электрооборудования. Многообразие моделей и марок кабеля на сайте ООО "Спецкомплект" предоставляют широкий выбор для оптового и розничного клиента.
Компания предлагает ассортимент качественных товаров, таких как К1153, К1154, К1155, КМ, Арматура для СИП ENSTO, КВВГ, КВбБШв, АС,ДКС, ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ КТ, ОКП, ОКГТ.
Строительство жилых и индустриальных многоуровневых объектов влечет за собой привлечение особой строительной техники, снабженной для осуществления назначенных задач. Выполнение строительных работ происходит по стадиям, в связи, с чем, задействовать строительную технику тоже приходится по шагам, в зависимости от поставленных задач.
Но покупка таковой специальной техники влечет огромные затраты. Так как стоит она дорого, компания "Сапрос" рекомендует услуги аренды строительной техники. Наш автопарк укомплектован всем необходимым для строительства автотранспортом. Быстрый заказ спецтехники можно сделать через интернет, заполнив заявку онлайн на сайте компании. В Самаре мы пользуемя популярностью именно за качественное и быстрое обслуживание клиентов, предоставляя такую услугу, как гидромолот аренда. Наши специалисты при необходимости в полном объеме проконсультируют Вас о более подходящем под запросы автотранспорте, что позволит сэкономить и время и финансы.